Ama-Y2 SERIES MOTORS - ama-reducers, ama-worm reducers, ama-gearbox we-worm, ama-gearbox weplanethi, ama-speed reducers, ama-variator, ama-helical gear, ama-sprial bevel gear, ama-gearbox wezolimo, amagiya kagandaganda, amagiya weloli, u-gearbox wesibungu
Y2 UCHUNGECHUNGE izithuthuthu
Ikhaya / motor / Y2 UCHUNGECHUNGE Izithuthi
Y2 ISINGENISO ESIVELELE
Uchungechunge lwe-Y2 lesigaba sesithathu sama-motors asynchronous, athuthukiswe ngamasu amasha, avuselelwa futhi athuthukisa imikhiqizo ngokuya ngama-Y series motors.
Ama-motors we-Y2 chungechunge aklanywe ngokuphelele futhi uhlobo lupholile lwabalandeli, uhlobo lwe-squirrel cage kanye nenoveli ekwakhiweni futhi enhle ngokubukeka, isakhiwo esihlangene, umsindo ophansi, ukusebenza kahle okuphezulu, i-torque enkulu, ukusebenza okuhle kakhulu kokuqala, ukugcinwa okulula, njll. zamukele ukwahlukaniswa ngezigaba kuka-F futhi zaklanywa njengendlela yokuhlola uhlelo lokuvikela ngokuya ngokwenziwa kwamazwe omhlaba.
Ama-motor we-Y2 angasetshenziswa kabanzi ezintweni ezahlukahlukene zokushayela ezifana namathuluzi womshini, ama-blowers, amaphampu, ama-gearbox, ama-compressors, abathumeli, imishini yezolimo nokunye.
Izinga lokushisa eliphakeme: 15 ℃ ≤≤40 ℃ .Altitude: alikho ngaphezu kwamamitha ayi-1000 ukusuka ezingeni lesembozo.
Amandla alinganisiwe: 380V. Imvamisa ekalwe: 50HZ,
Ukuxhuma: Ukuxhumeka kwe-Y kwamukelwa ama-motors angaphansi kwe-3KW (kufakwe i-3KW) futhi ukuxhumana kwe-△ kwamukelwa kwabanye okungaphezu kwe-4KW (kufakwe ne-4KW) Isabelo sokusebenza: uhlelo lokusebenza oluqhubekayo (S1).
Ukwahlukanisa kwe-F class, izinga lokushisa elinyukayo le-stator emazombezombe lihlolwe ku-80K (ngendlela yokumelana).
Ibanga lokuvikelwa: emzimbeni omkhulu yi-IP54, ebhokisini lokugcina lingafinyelela ku-IP55. Indlela yokupholisa: IC411.
Amalungiselelo wokukhulisa ama-motors ahambisana nesincomo se-IEC34-7. Kunezinhlelo ezine eziyisisekelo ezikhonjisiwe njengamathebula nezibalo ezilandelayo.